Google waxay rakibi doontaa xarunta Costa Rica - Geofumadas
Sii jiritaanka blogs
Google si loo dhiso xarun dhexe ee Costa Rica
Abriil, 2008 Internet iyo Blogs, Sii jiritaanka blogs
Mid ka mid ah sababaha guusha Google waa gardarrada ay ku soo galayso gobol kasta; Sanadkii la soo dhaafay wuxuu aasaasay xarun ku taal Argentina si uu u daboolo koontada koonfurta, hadda wuxuu ku dhawaaqay inuu ka dhisi doono xarun ku taal Costa Rica si uu ugu adeego Bartamaha Ameerika.
Faa'iidooyinka aan ka fileyn karno kuwa inaga mid ah inay ka helaan kuwa loo yaqaan 'Google', ayaa ah inay bixin karaan dakhliga Most iyada oo loo marayo Western Union sida ay horayba uga sameeyeen qaar ka mid ah wadamada Koonfurta Ameerika.
Bayaanku wuxuu sheegayaa, waxyaabo kale:
Waqtigan la joogo, Google wuxuu u shaqeeyaa howlaheeda Bartamaha Ameerika isagoo ka socda Mexico, laakiin waxaa la siiyaa kobaca suuqa gobolka, iyo sidoo kale suurtagalnimada suuqa Costa Rican, "waxay go'aansadeen inay xafiis ka dhisaan San José muddada gaaban," ayuu yiri madaxweynaha Costa Rican.
Sidoo kale, Google waxay u soo jeedisay madaxweynaha Costa Rican inuu digitiito ka dhigo buugaagta maktabadaha dadweynaha, oo ah aalad lagu dhiiri geliyo barashada iyada oo loo marayo aaladaha kumbuyuutarrada, iyo sidoo kale in kor loo qaado shirkadaha yar yar iyo kuwa dhexdhexaadka ah ee Costa Rican isla markaana loo sameeyo aalad lagu xoojiyo dhoofinta ay ka helaan Shabakadda.
Dareenkan, Google, sida ku xusan bayaanka, waxay rajaynaysaa inay ka sameysato modules ka Costa Rica kaas oo ‘SMEs’ ​​ay yeelan karaan xafiisyo macmal ah oo ballaarinaya marin u helkooda suuqa caalamiga ah… dabcan, Google wax walba waa ganacsi, laakiin tan ayaa laga yaabaa inaan awoodno sidoo kale lacag hel Ganacsiyada.
Arintan Ticos waxay kufiican tahay gobolka, halkaas oo ay ku taal xarun Microsoft, dhowr barnaamijyo kumbuyuutareed iyo dadaallo badan oo looga boodaayo qeybinta dijitaalka ah ... waxay isku dayeysaa inay isha ku hayso El Salvador iyo Panama.
Waa wax la yaab leh, in haddii ay dhacdo meesha ay ka dhigaan bayaankan rasmiga ah, wasiirka ganacsiga Marco Vinicio Ruiz wuxuu yiri "80% software-ka lagu iibiyo Bartamaha Ameerika iyo Caribbean waxay ka yimaadaan Costa Rica" ... Waxaan aaminsanahay in 80% software-ka lagu iibiyo Bartamaha Ameerika waxay ka timaaddaa sofwarewarez z
Post Previous" Hore AutoCAD dwg blocks - In ka badan 12,000
Post Next World Wind, NASA Google EarthNext »